Saturday October 29, 2016 - 13:08:08 in Wararka by
Nasiib Darro dad badan oo kamid ah Soomaalida ku Baraarugsana heerka uu gaaray gumeysiga lagu haayo waxayna ku mashquulsanyihiin aqbalidda oraah hal ku dhig been ah sida "dhi udhiska qaranka Soomaaliya", "Soomaaliya waa dowlad caalamku aqoonsanyihiin" iyo Erayo kale oo dhammaantood qurux badan balse ah been abuur dadka lagu seexinayo.
Falsafadda duullaanka dhanka Fikirka waa midka ugu daran ee umad lagu qabsan karo wuxuuna ka dhib badanyahay duullaanka dhanka Melleteriga ah oo lala dagaallami karo waqtiguba ha dheeraadee balse duullaankan dhanka maskaxda ah wuxuu u baahanyahay dadaal dheer.
Dowladda Federaalka ayaa sanadadii lasoo dhaafay suuq geyn usameynaysay wax u eg dhaqankii qowmu luudka waxayna golaheeda wasiiradu ansixiyeen waxa loogu yeedho "Xeerka Jinsiga qaranka".
Baasaboorka soomaaliga ee dowladda Federaalka soo daabacday waxaa ku qoran kalimadda ‘gender' haddaba maxaa loola jeedaa Kalimaddaas waxaa sharaxaad dheeri ah ka bixinaya saxafiga Jamaal Cusmaan oo katirsan shabakadda Dalsoor , ’‘Gabadha waa la ninayn karaa. Ninkana waa la gabadhayn karaa.’ Kalmadda ‘gender’ oo ku qoran Baasaboorka Soomaaliga ah waxay tilmaamaysaa in bulshada Soomaaliyeed aqbashay jiritaanka wax aan ahayn nin iyo naag.
Hoos ka Daawo Vedo ama halkan Guji